musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Denmark Kuputsa Nhau » Denmark inogumisa zvese COVID-19 zvirambidzo mushure memazuva makumi mashanu nemakumi mana nemasere ekuvhara
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Denmark Kuputsa Nhau • dzidzo • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kutanga pakati pehusiku munaGunyana 10, iyo COVID-19 hutachiona hahusarudzwe se "chirwere chakakomba munharaunda" nehurumende yeDenmark.
Zviremera zveDenmark zvakazivisa kuti hosha iri pasi pekutonga.
Hapana matanho akakosha achashandiswa muDenmark kubata neCOVID-19 kutanga Nyamavhuvhu 10.
Zviremera zveDenmark zvakachengetedza kodzero yekusimbisa matanho akasarudzika "kana denda rikatyisidzira mabasa akakosha munharaunda".
Vakuru vehurumende yeDenmark vakazivisa kuti kutanga kubva na12: 00 mangwanani musi waGunyana 10, hutachiona hweCOVID-19 hahusarudzwe se "chirwere chakakomba munzanga" munyika, uye hapana matanho akasarudzika achashandiswa kurwisa coronavirus mukati memiganhu yeDanish.
Yese yasara anti-COVID-19 mirawo yakabviswa zviri pamutemo munyika kubvira nhasi, kugadzira Dhenimaki nyika yekutanga muEuropean Union (EU) kudzoka zvachose kune pre-denda rezuva nezuva.
Zvese zvirambidzo zvakambosimbisirwa nezviremera zveDanish, zvinosanganisira COVID kupfuura zvinoda kupinda mumakirabhu ehusiku uye dzimwe nzvimbo, kurambidzwa kuungana kwevanhu vazhinji uye kusungirwa kupfeka-mask, kwakasimudzwa, mazuva 548 mushure mekunge Mutungamiriri weDenmark Mette Frederiksen atanga kuzivisa kukiya nyika.
Muna Kurume 2020, Denmark yaive pakati penyika dzekutanga kumanikidza matanho akasimba ekurwisa COVID-19.
Vatanga vazivisa danho rekusiya hwaro hwepamutemo hwekurambidza mwedzi wapfuura, zviremera zveDenmark zvakati "denda riri kudzorwa." Vakachengetedza kodzero yekusimbisa matanho akakosha "kana denda iri rikatyisidzira mabasa akakosha munharaunda."
Sekureva kwevakuru vezvehutano veDenmark, "rekodhi yakakwira yekudzivirira majekiseni" yakabatsira nyika kuisa muenzaniso muEuropean Union uye kumuka kuupenyu pasina zvirango zvine chekuita neCOBV chero. Vatatu kubva pavane vagari veDenmark vanofunga kuti kubaya nhomba iri basa revanhu, sekuongorora kweEurobarometer kwakaitwa mwedzi wapfuura vakamirira Paramende yeEurope.
Kunze kwevane chiuru vakasarudzwa veDanes, 1,000% vakabvumirana zvachose neshoko rekuti munhu wese anofanira kubayiwa jekiseni, nepo 43% vakati vanobvumirana. Kune iyo yose EU, iyo chikamu chevanhu vanobvumirana zvakakwana kana zvakanyanya chirevo chakamira pa31.
Pakazosvika Nyamavhuvhu, pamusoro pe73% yevaDenmark 5.8 mamirioni ehuwandu hwaive hwabaiwa zvizere, paine anopfuura 8.6 mamirioni anti-COVID madosi akagashirwa akazara. Mukati mehosha iyi, Denmark yakanyoresa zvinodarika mazana matatu nemakumi matatu nemaviri ezviitiko zvehutachiona.